Odisha လူမျိုးစု Tour- Tribes ကျေးရွာခရီးစဉ်အိန္ဒိယ။ + 91-993.702-7574 အပေါ် Call
သင်သိပါသလော, Odisha လူဦးရေရဲ့ 29% လူမျိုးစုပါသလဲ သငျသညျလူသစ်တွေ့ဆုံနှင့်အသစ်ယဉ်ကျေးမှုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုခစျြသောလူများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်ဆိုလျှင်, သဲကျောက်စရစ် '' Odisha လူမျိုးစုခရီးစဉ်သည်သင်၏သွားလာရင်းမှ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာစူးစမ်းဖို့ 62 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအနွယ်နှင့်အတူ, Odisha လူမျိုးစုခရီးစဉ်အသက်အရွယ်အစဉ်အလာ, တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမျိုးစုကျေးရွာများအပေါ်အာရုံစိုက်။ , Odisha လူမျိုးစုခရီးစဉ်နှင့်တကွ, လူမျိုးစုနေရာများမှတစ်ခုကူးခရီးထွက် Set သဲကျောက်စရစ်ကကမ်းလှမ်းနှင့်နှစ်ရှည်လများလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အကောက်ခွန်၏အနီးအနားရှိရှုထောင့်ရှိသည်။ လူမျိုးစုကလူ Dhemsa ၏တီးလုံးမှကခုန်အဖြစ်ညနေခင်းဖြုန်းနေတဲ့ Real-ဘဝအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Odisha လူမျိုးစုခရီးစဉ်နှင့်အတူလူမျိုးစုမြို့များအတွက်အပတ်စဉ်ထုတ်စျေးကွက်ခံစားနိုင်။
တစ်ခရီးထွက်တင်ထားရန်အဆင်သင့် Get သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကျော်လွန်လမ်းနှင့်ရှေးဟောင်း Odisha ၏ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်စည်းဝေးကြီးများမှာကြည့်ရထားတဲ့ထူးကဲနဲ့မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ သငျသညျခရီးသွားအတွေ့အကြုံတစ်ခုတစ်သက်တာပေးပေမယ့်လည်းသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်မသာသည့်စွန့်စားမှုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မယ်။ အဆိုပါလူမျိုးစုကျေးရွာခရီးစဉ်သဘောသဘာဝ, ရှုခင်း, လူထုပုံပြင်များ, အခမ်းအနားများ, ကခုန်, ထုံးတမ်း, အနုပညာ, လက်မှုပညာနှင့်ပုံပြင်များပေါင်းစပ်။ အမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူသိများနေသောလူများ, ၏သေးငယ်တဲ့ကိုလိုနီအမြဲမြို့ပြလူများ, အပြန်အလှန်အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်ကြသည်။
သဲကျောက်စရစ်'' Odisha လူမျိုးစုခရီးစဉ်တစ်ခုစွန့်စားခရီးပေါ်တွင်သင်ထားမည်ဖြစ်သော Odisha လူမျိုးစု Tour Packages နှင့် Odisha ကျေးရွာခရီးစဉ်ပေးထားပါတယ်။
စျေးနှုန်း: 180045 INR (13 Nights အစီအစဉ် | ခရီးစဉ် Code ကို: 002)
Bhubaneshwar လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှာဆိုက်ရောက်နှင့်ဟိုတယ်ကိုလွှဲပြောင်း။ Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း - ဒေသခံဘုရားကျောင်းမှနေ့လည်ခင်းအလည်အပတ်ခရီး။ နေ့ချင်းညချင်း Bhubaneswar မှာ။
နေ့ 2: BHUBANESWAR - PIPILI - PURI
Dhauli (Shanti ပုထိုးတော်ကြီး) သွားရောက်ခြင်း Puri မှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ, Hirapur (64 Yogini ဗိမာနျတျော), Pipli (ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းအလုပ်ရွာ) & Raghurajpur (ရွာပန်းချီ) ။ လမျးခရီးတွင်လည်းအိမ်၏နံရံပေါ် Chita-ပန်းချီကားများကိုခံစား။ နေ့ချင်းညချင်း Puri မှာ။
နေ့ 03: PURI - KONARK - PURI
အစောပိုင်းနံနက်သခင်ဘုရား Jagannath ဘုရားကျောင်း, Gundicha ဘုရားကျောင်းနှင့် Loknath ဗိမာနျတျောသို့သွားရောက်။ Konark ၏ Sun ကဘုရားကျောင်း (စ Black ကစေတီတော်အဖြစ်ကိုခေါ်), Chandrabhaga သဲသောင်ပြင်နှင့်ငါးဖမ်းကျေးရွာများသို့နေ့လယ်အလည်အပတ်ခရီး။ နေ့ချင်းညချင်းမှာ ပြည့်သော.
နေ့ 04: PURI - CHILIKA LAKE - GOPALPUR
Barkul မှတဆင့် Gopalpur မှနံနက်စာ drive ကိုအပြီးအဆိုပါနံနက်။ သာယာလှပ Chilika Barkul အနီးလမ်းပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုစွန်, mackerel နှင့်ကဏန်းရှာဖွေနေငါးမျှားပေါ်တွင်ငါးဖမ်းသမားကြည့်ရှုရန်ရေကန်သို့သွားရောက်။ Gopalpur ဖို့ Continue ။ နေ့ချင်းညချင်း Gopalpur မှာ။
နေ့ 05: GOPALPUR - TAPTAPANI - RAYAGADA
Chandragiri မှာ Taptapani နှင့်တိဘက်အခြေချစခန်းများမှာပူဆာလဖာနွေဦးမှ Rayagada en-လမ်းကြောင်းခရီးစဉ်ကိုမှနံနက်စာရရှိသောပြီးနောက်။ နေ့ချင်းညချင်း Rayagada မှာ။
နေ့ 06: RAYAGADA - PUTASINGH - RAYAGADA
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်, ထို့နောက်ပြန် Rayagada ရန်, Soura လူမျိုးစု Market ကသွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Rayagada မှာ။
နေ့ 07: RAYAGADA - KOTHAGARH
Kutia Kondh လူမျိုးအုပ်စုများသို့သွားရောက်ရန် Tumudibandha ဒေသများသို့နံနက်စာလေ့လာရေးခရီးပြီးနောက်။ Kotgarh မှာ၎င်းတို့၏စျေးကွက်မှအလည်အပတ်ပြန်လာနေစဉ်။ လမျးခရီးတှငျ, အချိန်ပါမစ်ရှိလျှင်, နေရာအောင် Dhokra ကာစ်တင်နှင့်လူမျိုးစုရတနာသွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Rayagada မှာ။
နေ့ 08: RAYAGADA - JEYPORE
Chatikona မှာ Dongria Kondh လူမျိုးစုစျေးကွက်မှနံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးအပြီး, ပြီးတော့ Jeypore လမ်းမှာအနည်းငယ် Desia Kondh နှင့်မာလီလူမျိုးအုပ်စုများသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ကားမောင်းအဆိုပါနံနက်။ နေ့ချင်းညချင်း Jeypore မှာ။
နေ့ 09: JEYPORE
နံနက်စာ drive ကိုပြီးနောက် Bonda လူမျိုးအုပ်စုများ၏အများဆုံးရောင်စုံပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထို့နောက်ရောင်စုံ Gadabas & Didayee Tribes သွားရောက် Onukudelli ရန်။ နေ့ချင်းညချင်း Jeypore မှာ။
နေ့ 10: JEYPORE - KUNDULI - JEYPORE
နံနက် (ကအလွန်ရောင်စုံစျေးကွက်သည်) Sunabeda မှတဆင့်ဝေး Kundli 65 ကီလိုမီတာအတွင်းရှိ Sanaparoja & မာလီအမျိုးအနွယ်၏အကြီးမားဆုံးလူမျိုးစုအပတ်စဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်သက်သေခံဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ ထိုအခါ Koraput မှာသခင်ဘုရား Jagannath ဘုရားကျောင်းနှင့်လူမျိုးစုပြတိုက်လာရောက်လည်ပတ် Jeypore မှမောင်းတယ်။ နေ့ချင်းညချင်း Jeypore မှာ။
နေ့ 11: JEYPORE - GUPTESWAR - BALIGAON - JEYPORE
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်, သခင် Shiva ဘုရားကျောင်းနှင့်အနည်းငယ် Dhruba Tribes သွားရောက် Gupteswar မှမောင်းတယ်။ ထိုအခါ Baligaon မှာသူတို့ရဲ့အပတ်စဉ်ဈေးကွက်။ နေ့ချင်းညချင်း Jeypore မှာ။
နေ့ 12: JEYPORE - Visakhapatnam
ဖြည်းဖြည်းနံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်, Visakhapatnam မှမောင်းတယ်။ နေ့လည်ခင်းကမ်းခြေပေါ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ နေ့ချင်းညချင်း Vizag မှာ။
နေ့ 13: Visakhapatnam
Simhachalam ဗိမာနျတျောမှနံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးပြီးနောက်။ နေ့ကိုအခမဲ့အရာကြွင်းလေ။ နေ့ချင်းညချင်း Vizag မှာ။
နေ့ 14: ထွက်ခွာ
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မှစ. လမ်းခရီးဘို့ Vizag လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှလွှဲပြောင်း။
1TH စကျတငျဘာ, 30TH Oct FROM - - 26TH DEC 14 & 2018TH Jan TO သို့ 16ST မတ် 31 FROM မှ) 2019st ဧပြီ FROM မှစျေးနှုန်း :-( တရားဝင်မှု
အိပ်ရာနှင့်အတူအပိုလူတစ်ဦး 20350 25850 31350 45650
Jan 1 25TH TO သို့ 15TH Oct & 2018TH DEC 15 FROM မှ) - 2019ST Oct FROM မှစျေးနှုန်း :-( တရားဝင်မှု
အိပ်ရာနှင့်အတူအပိုလူတစ်ဦး 24000 31000 37600 54700
နေရာ ဘတ်ဂျက်ဟိုတယ် စံဟိုတယ် Deluxe ဟိုတယ် ဇိမ်ခံဟိုတယ်
Bhubaneswar အလားတူဟိုတယ် Sapphire ပလာဇာ / အလားတူဟိုတယ်, La Franklin / ဟိုတယ်အဆိုပါသရဖူ Mayfair ဂွန
ပြည့်သော အလားတူဟိုတယ် Naren နန်းတော် / အလားတူအင်ပါယာ / မာန Ananya / အလားတူပညာရှင် Hans Co. , Co. , အုန်း / Mayfair လှိုင်းတံပိုးတို့သည်
GOPALPUR ပင်လယ်ပြင်၏ဟိုတယ်သီချင်း Panthnivas Swosti အုန်း Resort ကို Mayfair Palm Beach တွင်
JEYPORE Jeypore မင်္ဂလာပါ Jeypore မင်္ဂလာပါ Jeypore မင်္ဂလာပါ Jeypore မင်္ဂလာပါ
RAYAGADA စိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
VISHAKHAPATNAM အလားတူဟိုတယ် AKSHAYA / အလားတူ WINSAR ပန်းခြံ / အလားတူ DASPALLA / အလားတူ Novotel /
အခန်းများအထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဟိုတယ်များမှာမရရှိနိုင်ဘူးဆိုရငျ 1), ငါတို့သည်သင်တို့အလားတူအမျိုးအစားဟိုတယ်များပေးပါလိမ့်မယ်။
2: ဟိုတယ် Rayagada & Jeypore မှာအဘယ်သူမျှမ Deluxe နှင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ သာ Standard နှင့်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစား AC / အလားတူအခန်းရှိပါတယ်ရှိသည်။
08-10 Persons Tempo ကို Traveller
မနက်စာအတူ Bhubaneswar မှာတစ်ည AC အနေရာထိုင်ခင်း
မနက်စာအတူ Puri မှာနှစ်ဦးကိုညဥ့် AC အနေရာထိုင်ခင်း
မနက်စာအတူ Gopalpur မှာတစ်ည AC အနေရာထိုင်ခင်း
မနက်စာအတူ Rayagada မှာသုံးညဥ့် AC အနေရာထိုင်ခင်း
မနက်စာအတူ Jeypore မှာလေးယောက်ညဥ့် AC အနေရာထိုင်ခင်း
မနက်စာအတူ Vishakhapatnam မှာနှစ်ဦးကိုညဥ့် AC အနေရာထိုင်ခင်း
Chilika အိုင် Barkul မှာ Boating